Bazimisele ngokufukula umculo oweHip-Hop | News24
Bazimisele ngokufukula umculo oweHip-Hop
PHOTO: suppliedAmalunga eqembu i 5BORO Akhumzi, Spho no Lawrence abafuna ukuqhakambisa umculo we Hip Hp KwaDukuza.
IQEMBU lomculo weHip Hop lakwaDukuza elizibiza ngokuthi i-5 BORO liveze ukuthi lizimisele ukufukula amaciko akulomkhakha ngokuwanika amathuba okuthi umculo wawo udllalwe emisakazweni.
Leliqembu elakiwe izinsizwa eziwu-4 okungu Lawrence(Surname) ,Akhumzi(surname), Mvelo(surname) noSipho(surname), elasungulwa ngonyaka wezi-2009 futhi elisebnzisana nenkampani eqopha ezomculo kuleli, iSony Music.
Likhuluma nentatheli yeStanger Weekly lidalule ukuthi banomzungezo wokuhambela iziteshi zemisakazo futhi nezikamabonakude ezaziwayo kwelaseMzansi.
“Sifuna ukubeka amaciko aKwaDukuza kwibalazwe kulomkhakha ngokuthi balethi izingoma zabo ezimbili ezishishayo nalapho abaphumelelayo bazoba sethuba lokuthi izingoma zabo zidlalwe emisakazweni edumile futhi baphinde baqophe iMusic Video ngaphansi kwenkampanii esiqhopha kuyo,” kubeka liliqembu.
Bathe lomkhankaso bahlose ukuthi ukuwenzele kulelidolobha futhi uzobhekelela abaculi beHip Hop kuphela okumele baletha izingoma ezimbili
Okuthola eminye imininingwane ngalomkhankaso ungasheyela lezinombolo zocingo- 0844010673 noma 0638226648 -Supplied